Kana iwe uchiyera isingasviki 250 lbs, iwe une sarudzo ye mavhiripu kusarudza kubva pakureruka kusvika kune yakaremesa mhando. mavhiripu iyo inorema kupfuura 36 mapaundi inoonekwa seyakajairika.
Lightweight mavhiripu ari mumakumi matatu nematanhatu emapaundi renji; simba rakakwirira risingaremi kubva pamakumi matatu kusvika makumi matatu emapaunzi uye pasi pemakumi mapaundi makumi matatu ndiyo isina-kurema mavhiripu.
The wheelchair yakajairwa ndiyo yakachipa pane ese, asi ndiwo akaomesesa kutakura nekufambisa. Izvo zvakare hazvigadzirisike netsoka, ruoko uye musana zvinodzora zvese zviri kugadziriswa. Zvishandiso zvinoshandiswa zvinowanzo kuve zvakaderera unhu. Rudzi urwu rwe wiricheya haina kukurudzirwa kushandiswa kwezuva nezuva.
Iyo Yakareruka, iri Nani
A isina kurema wheelchair ine maneuverability yakawanda uye iri nyore kushandisa. Ivo vakakwana kune vanhu vasingakwanise kuendesa a wheelchair yakajairwa. Izvo zvinodhura zvakanyanya kupfuura zvakajairwa mavhiripu nekuti zvinhu zvinodhura zvinoshandiswa. Musana, tsoka uye zororo zororo zvinowanzo gadziridzwa uye zvakare zvine mamwe maitiro.
Simba repamusoro isina kurema wheelchair akanakira vanhu vanowanzoita zviitwa zvisingagoni kuitwa nechiyero kana kureruka mavhiripu. Ivo zvakare vanouya muhukuru husingawanikwe mune mwero kana huremu mavhiripu. ichi wiricheya yakasimba kwazvo uye inopa yakawanda maererano nekugadzirisa uye maneuverability.
Rudzi rwakanaka kwazvo rwe wiricheya Available
Iyo yekupedzisira-isina kurema wheelchair ndiyo yakareruka uye yakapusa kudzora nekufambisa uye ndiyo inonyanya kufarirwa kune avo vanopedza nguva dzakawandisa mune yavo wiricheya. Iyo zvakare yakasimba uye ine yakanyanya kugadzirisa, asi zvakare ndiyo inodhura kwazvo yeboka.
The wiricheya mutengo unopesana nehuremu hwawo, ndiko kuti iwo akareruka anodhura kupfuura anorema. Iko kushanda kunowedzerawo nemutengo. Standard mavhiripu zvinokurudzirwa chete kune dzimwe nguva kushandiswa uye uko pasina chero kudikanwa kwekuita kunodiwa.
Zvinodiwa neMushandisi zvinogara zvichikosha
Iwe unozofanirwa kunyatsofunga nezve izvo zvinodiwa nemushandisi uye maficha kana uchitenga inodhura isina kurema wheelchair. A isina kurema wheelchair hazvidiwe kana mushandisi achikwanisa kuendesa a wheelchair yakajairwa apo usingabayire kufamba, nyore nyaradzo uye mashandiro. Asi avo vasingakwanise kuendesa a wheelchair yakajairwa uchafanirwa kutarisa kureruka uremu sarudzo.
Kune vashandisi vanoda iyo wiricheya kwenguva yakareba, yakasimba simba isina huremu kana ultra-isina kurema wheelchair ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Kusarudza pakati pevaviri kunoenderana nemabasa emushandisi uye nemuviri wavo.
Mushandisi ane simba, anorema kana anoshanda anofanirwa kuenda pachigaro chakasimba apo vashandisi vakareruka vasinganyanyo shanda uye vasina kusimba panyama vangave vanokodzera sachigaro we-ultra-lightweight.